Faa'iidada Quraacdu U Leedahay Hawl-maalimeedka Qofka Iyo Caafimaadkiisa Guud - Daryeel Magazine
Faa’iidada Quraacdu U Leedahay Hawl-maalimeedka Qofka Iyo Caafimaadkiisa Guud
Cunista quraacda subaxdii ayaa la xaqiijiyey inay yarayso dhibaatooyinka la soo darisa maskaxda dadka, waxaanay u saamaxdaa in qofka jirkiisu noqdo mid caafimaad qaba maalintaas marka uu cuno cuntada subaxa ah.
Sida lagu soo saaray warbixin ay soo saartay Baker Mindlab laboratory oo ka mid ah xarunta baaritaanka dhibaatooyinka ee Susex oo ku taal magaalada Brighton, dadka quraacda si fiican u cuna, ayaa la ogaaday in 89% ay ka yaraato murugada, marka ay loollanka nolol-maalmeedkooda ku jiraan, waxaanay awood u leeyihiin inay iska cabiyaan cudurrada maskaxda soo aasiiba, isla markaana 7% ka firfircoon yihiin markay hawlaha shaqo qabanayaan dadka aan iyagu quraacan.
Dadka daraasaddan ka qaybgalay oo lagu sameeyey tijaabooyin isku xig-xiga oo laba casho ah, kuwaas oo hal maalin loo oggolaaday inay quraacdaan, maalinta kalena quraac la’aan lagu joojiyey, ayaa la helay inay ka caafimaad badan yihiin, kana hawl qabad badan yihiin markay quraacda cunaan.
Guud ahaan, 48% dadka waaweyn waxay tilmaamaan inay quraacda ka tagan ugu yaraan hal subax toddobaadyada ay shaqaynayaan sida lagu ogaaday afti laga qaaday 2,000 qof, waxana daraasaddan lagu shaaciyey in dadka ka taga quraacdu dareemaan diiqad, hawl qaban yaraan iyo caajis fara badan, iyada oo cilmi-baadhistu si gaar ah farta ugu fiiqday in dadka da’doodu u dhaxayso 25 ilaa 34 ay arrintan si ba’an u saamayso.
Dadka daraasadda laga qaaday ayaa 28% ka mid ah ayaa tibaaxay inay quraacda u illaawaan markay hurdada ku ragaan, tiro kaloo intaa la mid ahna waxay sheegeen in qoyskiisu kala ragaan quraacda, halkay qaar badan oo ka mid ahina xuseen inay kas uga tagaan.
Maraq Caafimaadka Guud Ee Qofka Wanaajiya, Cayilkana La Dagaalama Tarbiyada Caruurta Iyo Horumarinta Caafimaadkooda Guud